वार्नर, स्मिथ र बेनक्राफ्टबाट प्रतिबन्ध हटाउने क्रिकेट अस्ट्रेलियाको संकेत, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
वार्नर, स्मिथ र बेनक्राफ्टबाट प्रतिबन्ध हटाउने क्रिकेट अस्ट्रेलियाको संकेत
एजेन्सी। क्रिकेट अस्ट्रेलिया (सीए)ले बल टेम्परिङमा दोषी देखिएपछि प्रतिबन्ध लगाइएका तीन क्रिकेटरमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने संकेत गरेको छ । खेलाडी युनियनको बढ्दो मागपछि स्टिभ स्मिथ, डेभिड वार्नर र क्यामरन बेनक्राफ्टमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी गरिएको हो । यी तीनैजनालाई दक्षिण अफ्रिकाविरुद्धको टेस्टमा यही मार्चमा बल टेम्परिङमा दोषी पाइएपछि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
सीएका मुख्य कार्यकारी केभिन रोबर्टसका अनुसार युनियनको पत्र प्राप्त भएको छ र बोर्डले यस विषयमा विचार गरिरहेको छ । टिमका शीर्ष खेलाडीको अभावमा अस्ट्रेलियाले पछिल्ला सिरिजमा लगातार पराजय व्यहोरिरहेको छ । टेस्ट टिमले टिम पेनको कप्तानीमा पछिल्ला ३ टेस्टमा २ हारेको छ । वनडेको कप्तानी एरोन फिन्चले गरिरहेका छन् । वनडेमा इङल्याण्डसँग ५ खेल हारेको अस्ट्रेलियाले पर्थमा दक्षिण अफ्रिकाविरुद्धको वन डे पनि हारेको छ । टिमको हालत देखेर क्रिकेट विशेषज्ञहरुले पूर्व खेलाडीको प्रतिबन्ध हटाउने पक्षमा वकालत गरेका छन् ।